အစောပိုင်းလူကြီးများမှတဆင့်ကလေးဘဝတွင်လူ့ cortical ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအားပုံဖော်ခြင်း (၂၀၀၄) - Your Brain On Porn
အစောပိုင်းလူကြီး (2004) မှတဆင့်ငယ်စဉ်ကလေးဘဝစဉ်အတွင်းလူ့ cortical ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ dynamic မြေပုံ
proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်အေ 2004 မေလ 25; 101 (21): 8174-8179 ။
2004 မေလ 17 အွန်လိုင်းထုတ်ဝေသည်။ Doi: 10.1073 / pnas.0402680101
Nitin Gogtay,*† ဂျေး N. Giedd,* Leslie Lusk,* Kiralee အမ် Hayashi,‡ Deanna Greenstein,* A. အကက်သရင်း Vaituzis,* တွမ်အက်ဖ် Nugent, III ကို,* ဒါဝိဒ်သည်အိပ်ချ် Herman,* Liv အဘိဓါန်အက်စ် Clasen,* အာသာဒဗလျူ Toga,‡ Judith အယ်လ် Rapoport,* နှင့် ရှင်ပေါလုအမ် Thompson က‡
ကျနော်တို့အရေအတွက်လေးရှုထောင်မြေပုံနှင့်အချိန်-ချုံးပာသုံးပြီး 4-21 နှစ်ပေါင်း၏အသက်အရွယ်အကြားလူ့ cortical မီးခိုးရောင်ကိစ္စဖှံ့ဖွိုးတိုး၏ dynamic ခန္ဓာဗေဒ sequence ကိုသတင်းပို့ပါ။ ခန္ဓာဗေဒဦးနှောက် MRI Scan ဖတ်တိုင်း2နှစ်ပေါင်းရယူခဲ့ကြသည်ဘယ်သူကိုဘို့တဆယ်ကျန်းမာကလေးများ, 8-10 နှစ်ပေါင်းလေ့လာခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ cortical မျက်နှာပြင်၏မော်ဒယ်များနှင့် sulcal အထင်ကရအဆောက်အနှင့်မီးခိုးရောင်ကိစ္စသိပ်သည်းဆများအတွက်စာရင်းအင်းမော်ဒယ်ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်, လူ့ cortical ဖှံ့ဖွိုးတိုးတဲ့ spatiotemporally အသေးစိတ်အချိန်-ချုံး sequence ကိုအတွက်အသက်အပိုင်းအခြားကိုဖြတ်ပြီးမြင်နိုင်ပါသည်။ ရရှိလာတဲ့အချိန်-ချုံး "ရုပ်ရှင်" (ကြောင်းထုတ်ဖေါ်i) Higher-အလို့ငှာအသင်းအဖွဲ့ cortical (သူတို့ပေါင်းစပ်ထားတဲ့၏ functions များ, တီထွင်နေကြပါတယ်, သာနိမ့်ယူမှုကို somatosensory နှင့်အမြင်အာရုံ cortical ပြီးနောက်ရင့်ကျက်ခြင်း,ii) phylogenetically အဟောင်းတွေဦးနှောက်ဒေသများအစောပိုင်းကအသစ်များသူတွေကိုထက်ရင့်ကျက်။ ပုံမှန် cortical ဖှံ့ဖွိုးတိုးနှင့်အတူတိုက်ရိုက်နှိုင်းယှဉ်ထိုကဲ့သို့သောကလေးဘဝ-စတင်ခြင်း schizophrenia သို့မဟုတ်အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာအဖြစ်အချို့သော neurodevelopmental မမှန်၏နားလည်မှုကိုကူညီလိမ့်မည်။
လူ့ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု (ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် function တစ်ခု nonlinear လုပ်ငန်းစဉ်တခုဖြစ်ပါတယ်1-3), နှင့်ပုံမှန်ဦးနှောက်ရငျ့နားလည်သဘောပေါက် neurodevelopmental မမှန်ကိုနားလည်ဘို့မရှိမဖြစ်အရေးပါသည် (4, 5) ။ သိမြင်မှုဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု၏ heteromodal သဘောသဘာဝ (neurocognitive စွမ်းဆောင်ရည်၏လေ့လာမှုများအနေဖြင့်ထင်ရှား၏6, 7), အလုပ်လုပ်တဲ့ပုံရိပ် (functional MRI သို့မဟုတ် positronemission tomography) (8-10), နှင့် electroencephalogram ကွက်တိဝင်လေ့လာမှုများ (1, 2, 10) ။ မတိုင်မီကပုံရိပ်လေ့လာမှုများ (postpubertal အရှုံးအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက် prepubertal တိုးနှင့်အတူငယ်စဉ်ကလေးဘဝနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းမီးခိုးရောင်အမှု၌ဒေသဆိုင်ရာ nonlinear အပြောင်းအလဲများကို (GM က) သိပ်သည်းဆကိုပြသ11-14) ။ MRI အပေါ် GM ကသိပ်သည်းဆ glia, vasculature နှင့် dendritic နှင့် Synaptic ဖြစ်စဉ်များနှင့်အတူအာရုံခံတစ်ရှုပ်ထွေးဗိသုကာတစ်ဦးသွယ်ဝိုက်အတိုင်းအတာဖြစ်ပါတယ်။ GM ကရငျ့၏လေ့လာရေးအချိန်ကျော် cortical GM ကသိပ်သည်းဆအတွက်အရှုံးပြသ (15, 16), အရာယာယီမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်အစောပိုင်းလူကြီး (စဉ်အတွင်းတိုးလာ Synaptic တံစဉ်များကို၏ postmortem တွေ့ရှိချက်တွေနဲ့ဆက်နွယ်နေပါသည်17-19) ။ ဤတွင်ကျွန်တော်တစ်ဦးဦးနှောက်-မြေပုံ technique ကိုသုံးခြင်းဖြင့်ကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များတွင် cortical GM ကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏လေ့လာမှုတစ်ခုကိုတင်ပြခြင်းနှင့် 13 ကျန်းမာသားသမီးများ၏တစ်ဦး Prospect လေ့လာခဲ့နမူနာ (ဟောင်း 4-21 နှစ်), 2-8 နှစ်ပေါင်းတိုင်း 10 နှစ်ပေါင်း MRI နှင့်အတူ scan ဖတ်သူ ။ အဆိုပါ Scan ဖတ်ကလေးဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု၏ကာတွန်းအချိန်-ချုံး sequence ကို ( "ရုပ်ရှင်") ၏ဆောက်လုပ်ရေး enabled Scan ဖတ်ကြား၌ရမှတ်၏စာရင်းအင်း extrapolation, အချိန်ကျော်အတူတူဘာသာရပ်များအပေါ်အကြိမ်ကြိမ်ရရှိခဲ့ခဲ့ကြသည်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့အစောပိုင်းလူကြီးတဆင့်ငယ်စဉ်ကလေးဘဝအတွက် GM ကဖှံ့ဖွိုးတိုးတမတိုင်မီဖော်ပြထားသကဲ့သို့ nonlinear ပါလိမ့်မယ်နှင့် functional ရငျ့အချိန်နဲ့တိုက်ဆိုင်နေတဲ့ဒေသတွင်း, ဒေသ-တိကျတဲ့ထုံးစံ၌တိုးမယ်လို့တွေးဆ။ ငါတို့သည်လည်းပိုပြီးအဓိကလုပ်ငန်းဆောင်တာ (ဥပမာမူလတန်းမော်တာ cortex) နဲ့ဆက်စပ်ဒေသများပိုမိုရှုပ်ထွေးခြင်းနှင့် Integrated တာဝန်များကို (ဥပမာ, ယာယီပေါ်၌ရှိသောအမြှေး) နဲ့ပတ်သက်သောဒေသများနှင့်နှိုင်းယှဉ်အစောပိုင်းကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မယ်လို့ခန့်မှန်းခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါရလဒ်အကျူးများနှင့် postpubertal ကာလအတွင်း GM ကရငျ့တစ်ပြောင်းလဲနေသောမြေပုံဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များကိုသည်ထူးခြားပြောင်မြောက်ပင်သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောမီးမောင်းထိုးပြစဉ်အခါ, cortical GM ကဖှံ့ဖွိုးတိုးပထမဦးဆုံးဖွံ့ဖြိုးလာခြင်းတိုကျရိုကျနှင့် occipital ထမ်းဘိုးနှင့်အတူမူလတန်း sensorimotor cortical နှင့်တကွ, အလုပ်လုပ်တဲ့ရငျ့ sequence ကိုလိုကျနာဖို့ပေါ်လာသည်, နှင့် cortex ၏ကျန်ရှိသောတစ် parietal-to- အတွက်ဖွံ့ဖြိုးဆဲကွောငျးတငျပွ တိုကျရိုကျ (back-to-ရှေ့) လမျးညှနျခ။ အတော်ကြာအာရုံခံပုံစံများအနေဖြင့်သတင်းအချက်အလက်ပေါင်းစည်းကြောင်းအသင်းအဖွဲ့ဒေသများပါဝင်သည်သောသာလွန်ယာယီ cortex, နောက်ဆုံးရင့်ကျက်။ ထို့အပြင်ထို cortex ၏ရငျ့လည်း, ဤဒေသများဖန်တီးခဲ့ပြီးသောအတွက်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ် sequence ကိုလိုကျနာဖို့ထင်ရှား။ ,
ဘာသာရပ်များ။ နမူနာအသက်အပိုင်းအခြားမှာပြနေကြသည် စားပွဲတင် 1။ အားလုံးဘာသာရပ်များလူ့ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု၏စိတ်ကျန်းမာရေးလေ့လာမှုတစ်ခုဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောအမျိုးသားသိပ္ပံ (များအတွက်အသိုင်းအဝိုင်းထံမှစုဆောင်းခဲ့ကြ20) ။ အတိုချုပ်, အလည်အပတ်ခရီးတစ်လျှောက်တွင်မည်သည့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါလက္ခဏာကိုမဆိုဖယ်ထုတ်ရန်ဘာသာရပ်တစ်ခုစီကိုစနစ်တကျရှာဖွေတွေ့ရှိသည့်အင်တာဗျူးတစ်ခုပေးခဲ့သည်။ ဘာသာရပ်များသည်စိတ်ရောဂါဆိုင်ရာနှင့်အာရုံခံစားမှုဆိုင်ရာပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အတူ MRI နောက်ဆက်တွဲအတွက် ၂ နှစ်လျှင်တစ်ကြိမ်ပြန်လာခဲ့သည်။ ဤလေ့လာမှုတွင်ပါ ၀ င်ရန်သုံးနှစ်သို့မဟုတ်သုံးနှစ်ထက်ပိုသော MRI စကင်ဖတ်စစ်ဆေးပြီးအသက် ၄ နှစ်မှ ၂၁ နှစ်ကြားကလေးများအားလုံးကိုရွေးချယ်သည်။ အဆိုပါလေ့လာမှုကိုအမျိုးသားစိတ်ပညာကျန်းမာရေးဌာန၏အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာပြန်လည်သုံးသပ်ရေးဘုတ်အဖွဲ့မှအတည်ပြုပြီးအသက် ၁၈ နှစ်အရွယ်ဘာသာရပ်များမှသို့မဟုတ်အသေးစားဘာသာရပ်များမှမိဘများထံမှအသိပေးအကြောင်းကြားချက်ကိုရရှိခဲ့ပြီးအသေးအဖွဲအကြောင်းအရာတစ်ခုစီမှနောက်ထပ်ရေးသားထားသောသဘောတူညီချက်ရရှိခဲ့သည်။
Image ကိုထုတ်ယူခြင်းနှင့်သုံးသပ်ခြင်း။ MRI ပုံရိပ်တွေအတူတူ 1.5-T က General Electric ကင်နာအပေါ်စိတ်ကျန်းမာရေးအမျိုးသားအင်စတီကျုမှာဝယ်ယူခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ MRI sequence ကိုလေ့လာမှုတစ်လျှောက်လုံးတသမတ်တည်းဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ Coronal လေယာဉ်အတွက် axial လေယာဉ်နှင့် 1-မီလီမီတာချပ်ထဲမှာတဆက်တည်း 1.5-မီလီမီတာချပ် 2.0D လုယူ-gradient ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ရရှိသောခဲ့ကြသည်အတူ T3 မာန်တင်းပုံတွေကိုတည်ငြိမ်ပြည်နယ်ထဲမှာပဲ့တင်သံပြန်ပြောပြ။ imaging parameters တွေကိုခဲ့ကြသည်: အချိန်ပဲ့တင်သံ,5ms; အထပ်ထပ်အချိန်, 24 ms; လှန်ထောင့်, 45 °; ဝယ်ယူ matrix, 256 × 192; စိတ်လှုပ်ရှားအရေအတွက်, 1; နှင့်အမြင်, 24 စင်တီမီတာ၏လယ်ပြင်။ တစ်ဦးချင်းစီကိုအဓိကဆော့ဖျဝဲ / ဟာ့ဒ်ဝဲအဆင့်မြှင့်နှင့်တကွ, အချက်အလက်များ၏ယုံကြည်စိတ်ချရသည့်အဆင့်မြှင့်အဆင့်မြှင့်မီနှင့်အပြီးဘာသာရပ်များအစုတခု scan ဖတ်ခြင်းဖြင့်စမ်းသပ်ပြီးခင်နှင့်အပြီး (20) ။ အတိုချုပ်, တစ်ခုချင်းစီစကင်ဖတ်စစ်ဆေးဘို့, ရေဒီယိုကြိမ်နှုန်းဘက်လိုက်မှုလယ်ကွင်း-ဆုံးမခြင်း algorithm ကိုလျှောက်ထားခဲ့သည်။ baseline ပုံရိပ်တွေ (တစ်ဦးစံ 3D stereotaxic အာကာသသူတို့ကိုပြောင်းလဲ, ပုံမှန်ခဲ့ကြသည်21) ။ Follow-up, Scan ဖတ်ပြီးနောက်တူညီတဲ့အကြောင်းအရာကနေ scan နှင့်တစ်ဦးချင်းစီဘာသာရပ်များအတွက်အပြန်အလှန်မှတ်ပုံတင် Scan ဖတ် linearly (ဦးနှောက်ပုံထုတ်ခြင်း (တိုက်ချင်းပစ်ဒုံးပျံ) အာကာသများအတွက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Consortium သို့တစ်ခုသို့ဆက်စပ်ခဲ့အခြေခံမှ aligned ခဲ့ကြသည်22) ။ အများဆုံးထုတ်လုပ်မယ့် Gaussian အရောအနှောဖြန့်ဖြူး အသုံးပြု. GM က၏အသေးစိတ်မြေပုံများ, အဖြူကိစ္စနှင့် cerebrospinal fluid ကိုထုတ်လုပ်ပြီးတစ်ခုကျယ်ပြန့်အတည်ပြုတစ်ရှူးခွဲထုတ် တစ်ဦး posteriori ယင်းအချက်အလက်များ၏ segment (23, 24), နှင့်ဖော်ပြထားအဖြစ် cortex ၏မျက်နှာပြင်မော်ဒယ်ထို့နောက်အလိုအလြောကျအသီးအသီးဘာသာရပ်နှင့်အချိန်အချက်အဘို့အဖြည်ချ (25).
cortical ပုံစံတူညီသည့်အဖြစ်လူသိများ image-ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ technique ကို (25-27) (ပိုကောင်းတဲ့အချိန်ကျော် cortical ကွဲပြားခြားနားမှုသတ်မှတ်ပြီးဆက်လက်စနစ်တကျအပြောင်းအလဲများကို detect လုပ်ဖို့ပါဝါတိုးမြှင့်ဖို့အသုံးပြုခဲ့သည်25) ။ ဤသည်ချဉ်းကပ် Cross-ဘာသာရပ်နှိုင်းယှဉ်, အုပ်စုတစ်စုပျမ်းမျှနှင့်စာရင်းအင်းမြေပုံများအားမချခင်ဘာသာရပ်များကိုဖြတ်ပြီးအဖြစ်ဝေးတတ်နိုင်သမျှ cortical မျက်နှာပြင်ခန္ဓာဗေဒ၏ gyral features တွေတိုက်ပါတယ်။ ဒီ technique ကိုအချို့သောသဖွငျ့ခန္ဓာဗေဒကှဲလှဲဖယ်ရှားသောကြောင့်, cortical အစီအမံအဖြစ်အဓိက sulcal နှင့် gyral အထင်ကရအဆောက်အမှဆွေမျိုး, ဤသက်ရောက်မှုသတ်မှတ်ပြီးဆက်လက်တိုးတက်နိုင်စွမ်းအပေါ်စာရင်းအင်းသက်ရောက်မှုဖော်ထုတ်မယ်များအတွက်တိုးမြှင့်စာရင်းအင်းပါဝါရှိပါတယ်။ အဆိုပါ cortical တိုက်ဆိုင်သည့်ခြေလှမ်းမှာတော့အလယ်တန်းပုံပျက်သောဒေတာများ cortical ဒေသများတွင်သက်ဆိုင်ရာဖြတ်ပြီးပျမ်းမျှခြင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခံရဖို့ခွင့်ပြုသမျှသောအချိန်ကိုမှတ်အပေါင်းတို့နှင့်ဘာသာရပ်များကိုဖြတ်ပြီး gyral ပုံစံများ, ကိုက်ညီသောတွက်ချက်နေကြသည်။ ဦးနှောက်နှုန်း 34 sulcal အထင်ကရအဆောက်အတစ်အစုံဘာသာရပ်များကိုဖြတ်ပြီးသက်ဆိုင်ရာ cortical ဒေသများ အသုံးပြု. အခြားပေါ်သို့တဦးတည်း cortex ၏မြေပုံဖိအား။ ပုံတစ်ပုံကိုလေ့လာဆန်းစစ်လိင်, ဝိသေသလက္ခဏာလက်အောက်ခံမှမျက်စိကန်းနှင့်အသက်အရွယ်ချင်းစီကဦးနှောက်၏မျက်နှာပြင်တင်ဆက်မှုအပေါ်တစ်ခုချင်းစီကိုနှစ်ဦးနှစ်ဖက် hemisphere အတွက် 17 sulci တစ်ခုချင်းစီကိုခြေရာခံ။ ဤရွေ့ကား sulci အဆိုပါ Sylvian တွင်းအလယ်ပိုင်း, precentral နှင့် postcentral sulci ပါဝင်သည်, သာလွန်ယာယီ sulcus (STS) အဓိကကိုယ်ထည်, ဌာနခှဲက, STS posterior နျဌာနခှဲ, မူလတန်းနှင့်အလယ်တန်းအလယ်အလတ် sulci နှင့်ယာယီယုတ်ညံ့, သာလွန်နှင့်ယုတ်ညံ့တိုကျရိုကျ, intraparietal ကွှ STS, transverse occipital, olfactory, occipitotemporal နှင့်အပေါင်ပစ္စည်း sulci ။ အဓိက sulci contouring မှထို့အပြင် longitudinal တွင်းနယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်ခြောက်လ midline မှတ်တိုင်ခါးဆစ်အစုတခု hemisphere gyral ကန့်သတ်တည်ထောင်ရန်တစ်ဦးချင်းစီ hemisphere ကွပ်ထားတယ်ခဲ့သည်။ အထင်ကရအဆောက်အအသေးစိတ်ခန္ဓာဗေဒ protocol ကိုအညီသတ်မှတ်ခဲ့ကြသည်။ ဤသည် protocol ကို (အင်တာနက်ပေါ်ရှိရရှိနိုင်www.loni.ucla.edu/~khayashi/Public/medial_surface) နှင့်အစီရင်ခံအဖြစ်မြတ်နှင့် intrarater ယုံကြည်စိတ်ချရလူသိများခဲ့ပါသည် (25).
အုပ်စုအဘို့အချိန်-မှီခိုပျမ်းမျှအား 3D cortical မော်ဒယ် 2D ပုံသဏ္ဍာန်သတင်းအချက်အလက်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်တစ်ခုအရောင်ကုဒ်တာဝန်ပေးဖို့အတွက် cortical မော်ဒယ်နှင့်အတူတစ်လျှောက် 3D လေယာဉ်သို့အားလုံး gyral / sulcal အထင်ကရအဆောက်အ flattening အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။ ဒေတာကဒီအပြားအာကာသရှိကြ၏ပြီးတာနဲ့ sulcal features တွေ sulcal ခါးဆစ်၏ပျမ်းမျှအစုံမှဘာသာရပ်များကိုဖြတ်ပြီး aligned ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါအတိုင် cortical မြေပုံများအားသင်္ချာကိုသူတို့ယုတ်ခန္ဓာဗေဒတည်နေရာ (ထဲမှာ gyral features တွေပါတဲ့ပြတ်သားပျမ်းမျှအား cortical မော်ဒယ်ကိုထုတ်လုပ် 3D မှ reinflated ခဲ့ကြသည်28).
ဒေသခံ GM ကတွက်ချက်ရန်လည်းကျနော်တို့တစ်ဦးချင်းစီ cortical အမှတ်တစ်ဝှမ်း fixed အချင်းဝက်၏သေးငယ်တဲ့ဒေသတွင်း၌ GM က၏အချိုးအစား (15 မီလီမီတာ) ကိုတိုင်းတာရာများစွာကိုကြိုတင်လေ့လာမှုများ, (များတွင်အသုံးပြု "GM ကသိပ်သည်းဆ" ချေါတဲ့အတိုင်းအတာကိုအသုံးပြု15, 25, 26, 28) ။ အဆိုပါတစ်ခုတိုးလာ signal ကို-to-ဆူညံသံအချိုးပေးသေးငယ်တဲ့ရပ်ကွက်အတွင်း (ဒီအစီရင်ခံစာအတွက်အသုံးပြုတဲ့ 15-မီလီမီတာ kernel ကို) ကျော် GM က volumes ကိုအပေါ် GM က-သိပ်သည်းဆတိုင်းတာပျမ်းမျှသတင်းအချက်အလက်, ဒါကြောင့်ပျမ်းမျှကွာ cortical GM ကဖြေရှင်းအတွက်မွေးရာပါအသံဗလံအချို့ MRI အတွက်နယ်နိမိတ်။ GM ကသိပ်သည်းဆကိုအသုံးပြုသည်ဆိုပါကသို့သော်အချို့သောဒေသခံအာဏာကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်, နှင့်ချဉ်းကပ် sulcal ဘဏ်များဆန့်ကျင်ရာမှ data တွေကိုပျမ်းမျှနိုင်ပါတယ်။ အတိုင်းအရှည်လည်းအဖြစ်များတတ်သည်တိုးပွားလာသော cortical မျက်နှာပြင်အဖြစ်များတတ်သည်အတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုကနေဖုံးလွှမ်းနေတာကိုအညွှန်းကိန်း GM ကပြောင်းလဲမှုများလျော့နည်း GM ကတစ်ဦး fixed အချင်းဝက်၏ kernel ကိုအတွင်းနမူနာခံရဖို့ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အလုပ်, သို့သော်, K. ဇာတ်ကြောင်း, RM Bilder, AW Toga, RP ဝုဒ်, DE Rex, P. Szeszko, ဃရော်ဘင်ဆင်, Y. ဝမ်, အိပ်ချ် DeLuca, ဃ (GM ကသိပ်သည်းဆများနှင့်အထူအလွန်ဆက်နွယ်နေကြောင်းဖြစ်ကြောင်းပြသ Asuncion နှင့်ညနေ Thompson ကအတည်မပြုရသေးသောဒေတာ) နှင့်ထို့ကြောင့်ဖြစ်နိုင်ဖွယ်အညွှန်းကိန်းအလားတူရင့်ကျက်ဖြစ်စဉ်များ။
အဆိုပါ cortex အပေါ်တစ်ဦးချင်းစီရဲ့မျက်နှာပြင်မှာစာရင်းအင်းအရေးပါမှုအောင်မြင်ရန်ဖို့လုံလောက်တဲ့အာဏာကိုရှိခဲ့သည်ရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်, ကျနော်တို့ (GM ကပြောင်းလဲမှု၏မော်ဒယ်တပ်ဆင်နှင့်မျိုးစုံဆုတ်ယုတ်ကိန်းခန့်မှန်းR2)0မှ 1 ၏အကွာအဝေးအတွင်းကွဲပြားရာတစ်ခုချင်းစီကိုအမှတ်မှာ။ ၏တရားမဝင်သောဖြန့်ဖြူးခြင်းမှ R2အဆိုပါစာရင်းအင်းမော်ဒယ်အတွက်လွတ်လပ်မှုဒီဂရီ၏နံပါတ်များအတွက်ချိန်ညှိပါက (ထိုတရားမဝင်သောအယူအဆကိုငြင်းပယ်ရန်လုံလောက်သောအာဏာကိုလည်းမရှိရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်ဖြစ်နိုင်R2 တစ်ဦးချင်းစီ cortical အမှတ်မှာ = 0) ။ စံပြမထိုက်မတန်၏အရေးပါမှု, p(R2), ထို့နောက် (Data ပြမပါ) တစ်ဦးချင်းစီ cortical အမှတ်မှာကြံစည်ခဲ့သည်။ ရရှိလာတဲ့မြေပုံကြောင်းညွှန်ပြ R2 မြင်ကြပြောင်းလဲမှုများအလွန်သိသာဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုနီးပါးတိုင်း cortical အမှတ်မှာသုညမဟုတ်ပါဘူး။
စာရင်းအင်းကွက် (ကရောထွေး-မော်ဒယ်ဆုတ်ယုတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ အသုံးပြု. ထုတ်လုပ်ပြီးခဲ့ကြသည်11, 30) တစ်ခုလုံးကို cortical မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် 65,536 အချက်များအဖြစ်တစ်ဦးချင်းစီ lobar volumes ကိုအသီးအသီးမှာကိုလည်းမျက်နှာပြင်ကျော်အကျိုးစီးပွားများစွာကိုတိကျတဲ့အချက်များမှာ GM က volumes ကိုပါ။ တစ်ဦး nonlinear ရောထွေးမော်ဒယ်အသုံးပြုခဲ့သည်ဆိုသောကြောင့်, GM ကသိပ်သည်းဆအတွက် intersubject ကွဲပြားခြားနားမှုတစ်ခုစီကို cortical အမှတ်မှာ longitudinal အပြောင်းအလဲများကိုဖြေရှင်းရန်အပိုဆောင်းပါဝါပေးခြင်း, cortical ပြောင်းလဲမှု၏ intraindividual နှုန်းထားများအနေဖြင့်သီးခြားစီလုပ်ပါတယ်ခဲ့ကြသည်။ မော်ဒယ်အဆောက်အဦများအတွက် hypothesis စမ်းသပ်မှုအပေါ်အခြေခံပြီးခဲ့ကြသည် F α = 0.05 နှင့်အတူစာရင်းဇယား။ အထူး F စမ်းသပ်မှုတစ်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာတိုးတက်မှုနှုန်းမော်ဒယ်၏အမိန့်, ကုဗ quadratic, ဒါမှမဟုတ် linear ခဲ့ရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ တစ်ကုဗမော်ဒယ်သိသိသာသာမဟုတ်ခဲ့လျှင်, quadratic မော်ဒယ်စမျးသပျခံခဲ့ရ; တစ်ဦး quadratic မော်ဒယ်သိသိသာသာမဟုတ်ခဲ့လျှင်, တစ်ဦး linear မော်ဒယ်စမ်းသပ်ပြီးခဲ့သည်။ သိသိသာသာဆုတ်ယုတ်ညီမျှခြင်းမှလှူဒါန်းခဲ့သည်ဖြစ်စေအဆိုပါကုဗသို့မဟုတ် quadratic သက်တမ်းလျှင်ထို့ကြောင့်တစ်ဦးတိုးတက်မှုနှုန်းမော်ဒယ် polynomial / nonlinear ဖြစ်ခဲ့သည်။ တစ်ဦးချင်းစီယူဆချက်သာတစ်ချိန်ကစမ်းသပ်ပြီးခဲ့ပေးမျိုးစုံနှိုင်းယှဉ်မှုအတွက်စာရင်းဇယားများ၏ဆုံးမပဲ့ပြင်မလိုအပ်ခဲ့သည်။
အောက်ပါဒေသများတစ်ခုချင်းစီကိုကမ္ဘာ၏အနောက်ဘက်ခြမ်းဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းအတွက်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရ: precentral gyrus, မူလတန်းမော်တာ cortex (သင်္ဘောသဖန်း။ 1A), သာလွန်တိုကျရိုကျ gyrus, ဗဟို sulcus အနီး posterior န့်သတ်ချက် (သင်္ဘောသဖန်း။ 1B), ယုတ်ညံ့တိုကျရိုကျ gyrus, posterior န့်သတ်ချက် (သင်္ဘောသဖန်း။ 1C), ယုတ်ညံ့တိုကျရိုကျ sulcus, anterior န့်သတ်ချက် (သင်္ဘောသဖန်း။ 1Dအဆိုပါ dorsolateral prefrontal cortex အတွက်), ယုတ်ညံ့တိုကျရိုကျ sulcus (သင်္ဘောသဖန်း။ 1Eသာလွန်တိုကျရိုကျ sulcus ၏), anterior အဆုံး (သင်္ဘောသဖန်း။ 1F), တိုကျရိုကျတိုင် (သင်္ဘောသဖန်း။ 1Gpostcentral gyrus အတွက်), မူလတန်းအာရုံခံ cortex (သင်္ဘောသဖန်း။ 1H), supramarginal gyrus (ဧရိယာ 40) (သင်္ဘောသဖန်း။ 1I), angular gyrus (ဧရိယာ 39) (သင်္ဘောသဖန်း။ 1J), occipital တိုင် (သင်္ဘောသဖန်း။ 1K), anterior, အလယ်တန်းနှင့်သာလွန်ယာယီ gyrus (STG) ၏ posterior ဝေမျှ (သင်္ဘောသဖန်း။ 1 L ကို-N ကိုအဖြစ်ကောင်းစွာ), ယုတ်ညံ့ယာယီ gyrus အလယ်ပိုင်းကို, အ anterior နှင့် posterior ကန့်သတ် (သင်္ဘောသဖန်း။ 1 အို-မေး), နှင့်ယုတ်ညံ့မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် anterior နှင့် posterior olfactory sulcus ၏အဆုံးသတ် (သင်္ဘောသဖန်း။2R ကိုနှင့် S) နှင့်အပေါင်ပစ္စည်း sulcus ၏ anterior နှင့် posterior ကြီးစွန်းတိုင်အောင် (သင်္ဘောသဖန်း။2T ကနှင့်ဦး) ။ သက်ဆိုင်ရာအချက်များတူညီ sulcal အထင်ကရအဆောက်အ အသုံးပြု. နှစ်ဦးစလုံး hemisphere အပေါ်ကိုရှေးခယျြခဲ့သညျ။
အဆိုပါ cortical ရဲ့မျက်နှာပြင်အပေါ်အကျိုးစီးပွားဒေသများမှာရောနှောထားသော-မော်ဒယ်ဆုတ်ယုတ်ကွက်။ အောက်ပါဒေသများတစ်ခုချင်းစီကိုကမ္ဘာ၏အနောက်ဘက်ခြမ်းဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းအတွက်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရ: တစ်ဦးက, precentral gyrus နှင့်မူလတန်းမော်တာ cortex; B ကအလယ်ပိုင်း sulcus အနီးသာလွန်တိုကျရိုကျ gyrus, posterior အဆုံး; ...
အစောပိုင်းနှောင်းပိုင်းအချိန်-ချုံးပုံရိပ်တွေဖေါ်ပြခြင်းကဦးနှောက်၏အောက်ခြေမြင်ကွင်း။ ရမှတ် anterior ကိုက်ညီတဲ့နှင့် posterior အဆိုပါ olfactory sulcus (R နဲ့ S) နှင့်အပေါင်ပစ္စည်း sulcus (T ကနှင့်ဦး), နှင့်အပေါ်စိတ်ဝင်စားမှုများ၏ဒေသများသို့သက်ဆိုင်ရာရောထွေး-မော်ဒယ်ဂရပ်များ၏အဆုံးသတ် ...
ယေဘုယျအားစုစုပေါင်း GM ကအသံအတိုးအကျယ်အပျိုဖော်ဝင်န်းကျင်မှ စတင်. စဉ်ဆက်မပြတ်အရှုံးအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်အစောပိုင်းကအသက်အရွယ်မှာတိုးမြှင့်ဖို့ရှာတွေ့ခဲ့သည်။ သို့သော်အချိန်-ချုံး sequence ကို (သင်္ဘောသဖန်းသီးတွင်တွေ့မြင်အဖြစ်။ (Figs.22 နှင့် and3), 3), GM ကအရှုံး (ရငျ့) ၏ဖြစ်စဉ်ကို dorsal parietal cortical, အ interhemispheric အနားသတ်အနီးတွင်အထူးသဖြင့်မူလတန်း sensorimotor ဒေသများရှိပထမဦးဆုံးစတင်, အဲဒီနောက် parietal, occipital နှင့်နောက်ဆုံးတွင်ယာယီ cortex ကျော် caudally နှင့်နောက်ပိုင်းတွင်တိုကျရိုကျ cortex ကျော် rostrally ပြန့်နှံ့ခြင်းနှင့် ။ (ဤ sequence ကိုအဖြစ်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေထားတဲ့ရုပ်ရှင်ရုပ်ရှင် 1-4 အတွက်ရရှိနိုင် သတင်းအချက်အလက်ထောက်ပံ့ အဆိုပါ PNAS ကို web site ပေါ်တွင်။ ) တိုကျရိုကျနှင့် occipital ထမ်းဘိုးတို့ကိုအစောပိုင်း GM ကဆုံးရှုံးလျက်, တိုကျရိုကျပေါ်၌ရှိသောအမြှေးထဲမှာ, GM ကရငျ့နောက်ဆုံးမှာသာမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ရဲ့အဆုံးမှာ GM ကရှုံးသော dorsolateral prefrontal cortex, ပါဝငျသညျ။
အဆိုပါ cortical မျက်နှာပြင်ကျော် GM ကရငျ့၏ dynamic sequence ကို၏လက်ျာဘက်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်နှင့်ထိပ်တန်းအမြင်များ။ အဆိုပါဘက်ဘား GM ကပမာဏယူနစ်အတွက်အရောင်ကိုယ်စားပြုမှုပြသထားတယ်။ အဘို့အဖော်ပြထားသကဲ့သို့အဆိုပါကနဦး frames များကိုအဆိုပါ cortex အတွက်အကျိုးစီးပွားဒေသများပုံဖော် သဖန်းသီး။ 1။ ဤ ...
တစ်ဦးချင်းစီ cortical ငျဒသေမြားအတှငျးနောက်ထပ်ရငျ့ပုံစံများဆနျးစစျဖို့, ငါတို့ရောထွေး-မော်ဒယ်ဆုတ်ယုတ်အဓိက sulcal အထင်ကရအဆောက်အ အသုံးပြု. linear ၏မြေကွက်အဖြစ် nonlinear အဆိုပါ cortical ရဲ့မျက်နှာပြင်တစ်လျှောက်အကျိုးစီးပွားအချက်များမှာ GM က volumes ကိုအပေါ် (quadratic သို့မဟုတ်ကုဗ) အသက်အရွယ်သက်ရောက်မှုတည်ဆောက်ရန်စိစစ်ရာတွင်အသုံးပြု သက်ဆိုင်ရာခန္ဓာဗေဒအချိန်နှင့်ဘာသာရပ်များကိုဖြတ်ပြီးမှန်ကန်စွာဆက်နွယ်နေကြောင်းခံခဲ့ရကြောင်းသေချာစေရန်။ ငါတို့သည်ငါတို့၏ပိုကြီးတဲ့ Cross-Section နမူနာနှင့်အတူဤနမူနာထဲမှာယုတ် lobar volumes ကိုနှိုင်းယှဉ်လိုက်တဲ့အခါ (n = 149), စုစုပေါင်းနှင့် lobar GM က volumes ကိုများအတွက်ခေတ်ရေစီးကြောင်း (နှစ်ဦးစလုံးအုပ်စုများ (data တွေကိုပြမပါ) အတွက်သဘောတူညီမှုရှိကြ၏11) ။ သို့သော် cortex ဖြတ်ပြီးတစ်ဦးချင်းစီငျဒသေမှာ GM ကရငျ့တဲ့ variable ကိုရငျ့ပုံစံပြသထားတယ်။
အဆိုပါတိုကျရိုကျ cortex အတွင်း, အ precentral gyrus (သင်္ဘောသဖန်းသီး။ (Figs.1A1A နှင့် and3) 3) အစောပိုင်းရင့်ကျက်။ သင်္ဘောသဖန်းသီး, GM ကအရှုံးအတွက်သာလွန်နှင့်ယုတ်ညံ့တိုကျရိုကျ gyri လျှောက်တိုကျရိုကျပေါ်၌ရှိသောအမြှေး (ပို rostral ဒေသများသော်လည်းတစ်ဦးအစောပိုင်းအသက်အရွယ်မှာ linearly ဖြစ်စဉ်များ။ Figs.11 နှင့် 3, B-, Gထို့အပြင် nonlinear GM ကအရှုံးများတဖြည်းဖြည်းနောက်ပိုင်းတွင်ထိပ်များကညွှန်ပြအဖြစ်) (တစ်ဦး anterior တိုးတက်မှုအတွက်အောင်မြင်မှုရင့်ကျက်သင်္ဘောသဖန်း။ 1 B-D ကို), အ prefrontal cortex နောက်ဆုံး (သင်္ဘောသဖန်းသီးဖွံ့ဖြိုးလာခြင်းနှင့်အတူ။ 1, D, Eနှင့် and3) .3) ။ အဆိုပါ parietal ပေါ်၌ရှိသောအမြှေးမှာ GM ကအရှုံးအတွက် postcentral gyrus (သင်္ဘောသဖန်းသီးထဲမှာကစတင်ခဲ့သည်။ (Figs.1H1H နှင့် and3; 3; တစ်ဦး nonlinear အစောပိုင်းအထွတ်အထိပ်နှင့်အတူ), အ angular gyrus (ဧရိယာ 40 သို့နောက်ပိုင်းမှာတိုးတက်; သင်္ဘောသဖန်းသီး။ Figs.1I1I နှင့် and3), 3), နှင့် supramarginal gyrus (ဧရိယာ 39; သင်္ဘောသဖန်းသီး။ Figs.1J1J နှင့် and3) .3) ။ အဆိုပါအကျူးများနှင့် postcentral gyri အလားတူအဆိုပါတိုကျရိုကျနှင့် occipital ထမ်းဘိုး, (အစောပိုင်းသင်္ဘောသဖန်းသီးရင့်ကျက်။ 1 G နဲ့ K သည် နှင့် and33).
နောက်ပိုင်းရင့်ကျက်။ အဆိုပါယာယီပေါ်၌ရှိသောအမြှေး၏အစိတ်အပိုင်းများ, အခြားတစ်ဖက်တွင်, တစ်ဝိသေသနှောင်းပိုင်းကရငျ့ပုံစံကိုပြသ။ အဆိုပါယာယီပေါ်၌ရှိသောအမြှေးဟာတိုကျရိုကျနှင့် occipital ထမ်းဘိုး (သင်္ဘောသဖန်းသီးကဲ့သို့တူညီသောအချိန်ဝန်းကျင် GM ကအရှုံးပြသသောယာယီဝင်ရိုးစွန်း, မှလွဲ. နောက်ဆုံးရင့်ကျက်။ (Figs.1O1O နှင့် and3) .3) ။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်, အသာလွန်နှင့်ယုတ်ညံ့ယာယီ gyri (STG နဲ့ယုတ်ညံ့ယာယီ gyrus) ဒီအသက်အပိုင်းအခြားတစ်လျှောက်လုံး GM ကအရှုံး၏တူညီသောဒီဂရီမပြကြဘူး။ ဤသည်မှာလည်းအသက်အရွယ်သက်ရောက်မှု (သင်္ဘောသဖန်းသီးအဘို့အပြားချပ်ချပ်ဂရပ်များအားဖြင့်ပြသထားပါသည်။ 1 L ကိုနှင့် M နှင့် and3) .3) ။ အဆိုပါ STG အတွင်း, အ posterior အပိုင်း (တစ်ဦးကွဲပြား linear ဒုံးကျည်သွားလမ်းကိုပြသသင်္ဘောသဖန်း။ 1N).
အဆိုပါယုတ်ညံ့သည်ဦးနှောက်မျက်နှာပြင်တွင်, (ထိုအပေါင်ပစ္စည်း sulcus ၏ anterior အဆုံးနှင့် olfactory sulcus ၏ posterior အဆုံးအကြားယူဆ entorhinal cortex, အ rhinal sulcus မှ medial,) ကိုယုတ်ညံ့ယာယီပေါ်၌ရှိသောအမြှေး၏ medial ရှုထောင့်အစောပိုင်းရင့်ကျက်ခြင်းနှင့်အများကြီးအဲဒီနောက်မပြောင်းပါဘူး , အသက်သက်ရောက်မှုများအတွက်ပြားချပ်ချပ်ဂရပ်များမြင်အဖြစ် (သင်္ဘောသဖန်း။ 2T) ။ အလားတူရင့်ကျက်ပုံစံဟာ caudal နှင့်ယုတ်ညံ့တိုကျရိုကျပေါ်၌ရှိသောအမြှေး၏ medial အစိတ်အပိုင်းများကို (အတွင်းဖြစ်ပေါ်သင်္ဘောသဖန်း။ 2S, ယူဆ Piriform cortex) ။ အဆိုပါ orbitofrontal ဒေသများကျွန်တော်လေ့လာခဲ့ကြောင်းအသက်အကြီးဆုံးအသက်သည်အထိရင့်ကျက်ဆက်လက်သော်လည်းအဆိုပါ ventral ယာယီပေါ်၌ရှိသောအမြှေး၏အခြားအစိတ်အပိုင်းများ (ရငျ့တစ်ဦးနှစ်ဦးနှစ်ဖက်-to-medial ပုံစံကိုပြသသဖန်းသီး။ 2).
ဤတွင်ကျနော်တို့ကျန်းမာကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များ၏အလားအလာ, longitudinal လေ့လာမှုမှာလူ့ cortical ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု၏ပြောင်းလဲနေသောတိုးတက်မှုတစ်ခု visualization ပြသပါ။ အစောပိုင်းကအစီရင်ခံစာများဖြစ်စေအစားမြေပုံနည်းလမ်းများ (နဲ့အတူဖြစ်နိုင်သမျှကြောင်းကို Point-by-အချက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်များစွာ Cross-Section (ဆိုလိုသည်မှာတစ်ဦး MRI စကင်ကိုဘာသာရပ်တစ်ခုစီအတွက်တစ်ခါသာဝယ်ယူနေသည်) သို့မဟုတ်ယုတ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ volumes ကိုပေးအသုံးပြုသောနည်းလမ်းများပါပြီ11, 15) ။ ယုတ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ volumes ကိုပေးနည်းလမ်းများအဘယ်သူမျှမ spatiotemporal အသေးစိတ်များကိုသော်လည်း cross-section ဒီဇိုင်းများ, interindividual ကှဲလှဲနှင့်ဆောင်များတွင်သက်ရောက်မှုကလွှမ်းမိုးလျက်ရှိသည်။ ကျနော်တို့အတူတူပင်ကလေးများတစ်ဦး 10 နှစ်ကာလအတွင်းအလားအလာ rescanned ခဲ့ပြီးသောတစ် longitudinal ဝယ်ယူအကျူးများနှင့် postpubertal နမူနာ, လေ့လာနေဤန့်အသတ်ကိုကျော်လွှားကြပါပြီ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များကို, လူ့ cortical ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ heterochronicity မီးမောင်းထိုးပြနေချိန်တွင်, တစ်ဦးချင်းစီငျဒသေ Higher-အလို့ငှာအသင်းအဖွဲ့ဒေသများအောက်ပိုင်းယူမှုကို sensorimotor ဒေသများ, သူတို့ကပေါင်းစပ်ထားတဲ့၏လုပ်ငန်းဆောင်တာ, ရင့်ကျက်ခဲ့ကြပြီးမှသာရင့်ကျက်သည့်အတွက်ယာယီကွဲပြားရင့်ကျက်ဘယ်နေရာတွေမှာကိုလိုက်နာကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ထို့အပြင်သူက phylogenetically အဟောင်းတွေ cortical ဒေသများအသစ်များကို cortical ဒေသများထက်အစောပိုင်းရင့်ကျက်ပုံရသည်။
တိုကျရိုကျ-ပေါ်၌ရှိသောအမြှေးရငျ့မူလတန်းမော်တာ cortex (ထို precentral gyrus) တွင်စတင်နှင့် prefrontal cortex နောက်ဆုံးဖွံ့ဖြိုးဆဲနှင့်တကွ, သာလွန်ခြင်းနှင့်ယုတ်ညံ့တိုကျရိုကျ gyri ကျော် anteriorly ပြန့်ပွား, back-to-ရှေ့ဦးတည်ချက်အတွက်တိုးတက်။ ပြောင်းပြန်ဟာတိုကျရိုကျတိုင်မူလတန်းမော်တာ cortex အဖြစ်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်အတူတူပင်အသက်အရွယ်မှာရင့်ကျက်။ ဦးနှောက်၏ posterior ထက်ဝက်မှာရငျ့အဆိုပါ parietal ပေါ်၌ရှိသောအမြှေး၏ကျန်ကျော်အကြာတွင်ပြန့်ပွား, မူလတန်းအာရုံခံဧရိယာ၌စတင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါတိုကျရိုကျတိုင်ဆင်တူသည် occipital တိုင်အစောပိုင်းရင့်ကျက်။ lateral ယာယီပေါ်၌ရှိသောအမြှေးရင့်ကျက်ဖို့နောက်ဆုံးခဲ့ကြသည်။
ထို့ကြောင့် cortex ရင့်ကျက်ထားတဲ့အတွက် sequence ကိုသိမြင်မှုနှင့်အအလုပ်လုပ်တဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ဒေသတွင်းသက်ဆိုင်ရာသမိုင်းမှတ်တိုင်များနှင့်အတူသဘောတူ။ အစောပိုင်းရင့်ကျက်ပိုပြီးအခြေခံလုပ်ဆောင်ချက်များကိုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဦးနှောက်၏အစိတ်အပိုင်းများ: မော်တာများနှင့်အာရုံခံဦးနှောက်ဒေသများ Spatial တိမ်းညွတ်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်ဒေသများ, မိန့်ခွန်းနှင့်ဘာသာစကားဖွံ့ဖြိုးရေး, နှင့်အာရုံစူးစိုက်မှု (အထက်နဲ့အောက် parietal ပေါ်၌ရှိသောအမြှေး) ကနောက်တော်သို့လိုက်, ပထမရင့်ကျက်။ နောက်ပိုင်းရင့်ကျက်ဖို့အလုပ်အမှုဆောင် function ကို, အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်မော်တာညှိနှိုင်း (တိုကျရိုကျပေါ်၌ရှိသောအမြှေး) တွင်ပါဝင်ပတ်သက်ဒေသများဖြစ်ကြသည်။ မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းမူလတန်းအမြင်အာရုံ cortex ်အရသာနှင့်အနံ့အပြောင်းအလဲနဲ့တွင်ပါဝင်ပတ်သက်အဆိုပါတိုကျရိုကျတိုင်, နှင့် occipital တိုင်, ကိုလည်းစောစောရင့်ကျက်။ ဒါဟာရင့်ကျက် sequence ကိုလည်း (ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ anteriorly ဖြစ်စဉ်များအဖြစ်တိုးမြှင့်သည့်အမြင့်ဆုံး GM ကတန်ဖိုးများ, များအတွက်အထွတ်အထိပ်အသက်အရွယ်တွင်ထင်ဟပ်ခဲ့သည်သင်္ဘောသဖန်း။ 1 A-D နှင့် H-J ကို) ။ အမြင်အာရုံ, လက်ဝဲဘက်အပေါ် prefrontal cortex နှင့်ယုတ်ညံ့ parietal cortex အစောပိုင်းကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီနမူနာထဲမှာသားသမီးများ၏အများစုနေတဲ့လက်ဝဲ-ကြီးစိုးအတူညာသန်နေကြသည်ဟူသောအချက်ကိုမည်အကြောင်းအရာညာဘက်အခြမ်းအပေါ်သက်ဆိုင်ရာဒေသများထက်ရင့်ကျက် အစောပိုင်းရင့်ကျက်ကြောင်း hemisphere ။
အဆိုပါယာယီပေါ်၌ရှိသောအမြှေးတစ်ဦးကွဲပြားရငျ့ပုံစံနောက်သို့လိုက်ကြ၏။ ယာယီထမ်းဘိုးတို့ကိုအစောပိုင်းရင့်ကျက်။ ကျန်ရှိသောယာယီပေါ်၌ရှိသောအမြှေးအများစုဟာနောက်ဆုံးရင့်ကျက်အားထငျရှားသော STG ၏ posterior အစိတ်အပိုင်းအတွက်သေးငယ်တဲ့ဧရိယာ မှလွဲ. ဒီနမူနာများ၏အသက်အပိုင်းအခြားအတွင်းမှာရင့်ကျက်။ လူသားများအတွက်, ယာယီ cortex, သာလွန်ယာယီ sulcus, သာလွန်ယာယီ gyrus နှင့်အလယ်တန်းယာယီ gyrus ၏အထူးသဖြင့်အဆိုပါ posterior ရှုထောင့်ခုနှစ်, (prefrontal နှင့်ယုတ်ညံ့ parietal cortical နှင့်အတူ) တစ်ဦး heteromodal အသင်းအဖွဲ့ site ကိုဖြစ်ထင်နှင့်မှတ်ဉာဏ်၏ပေါင်းစည်းမှုနှင့်အတူပါဝင်ပတ်သက်နေသည် အော်ဒီယိုပုံရိပ်ယောင်အသင်းအဖွဲ့နှင့်အရာဝတ္ထု-အသိအမှတ်ပြုမှုလုပ်ဆောင်ချက်များကို (31-34) ။ ထို့ကြောင့်ယာယီ cortex နဲ့အခြားအသင်းအဖွဲ့ဒေသများပြီးနောက်ရင့်ကျက်ဆက်လက်ပြုလုပ်ပေါင်းစပ်ထားတဲ့၏ functions များ, အတော်လေးဖွံ့ဖြိုးဖြစ်ကြသည်။
Phylogenetically, အသက်အကြီးဆုံး cortical ဒေသများအချို့ (ဥပမာများအတွက် Piriform cortex နှင့် entorhinal cortex ၏ posterior အပိုင်း) ကိုယာယီပေါ်၌ရှိသောအမြှေး၏ medial ရှုထောင့်တွင်သို့မဟုတ်အနီးတိုကျရိုကျပေါ်၌ရှိသောအမြှေး၏ယုတ်ညံ့ခြင်းနှင့် medial ရှုထောင့်အပေါ်ယုတ်ညံ့သည်ဦးနှောက်မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာအိပ်ရ အဆိုပါ olfactory sulcus (anterior Piriform cortex နှင့် Orbital periallocortex) ၏ caudal အဆုံး (35-37) ။ ဤဒေသများ၏အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ရငျ့လုပ်ငန်းစဉ် linear သို့မဟုတ်ပြားချပ်ချပ်ကွက် (မြင်သည်အတိုင်း,4နှစ်ပေါင်းများ၏အသက်အရွယ်အားဖြင့်ပြီးသားအစောပိုင်း (ontogenetically) စတင်ပါပြီထငျရှားသင်္ဘောသဖန်း။2S ကိုနဲ့ T) ။ ဤဒေသများ မှစ. ရငျ့တဖြည်းဖြည်းနောက်ပိုင်းတွင်ဖြစ်စဉ်များ။ orbitofrontal cortical နောက်ပိုင်းတွင်ရင့်ကျက်သော်လည်းအဆိုပါယုတ်ညံ့တိုကျရိုကျ cortex ခုနှစ်, olfactory cortical ရဲ့ medial နှင့် posterior ရှုထောင့်, အစောပိုင်းရင့်ကျက်။ အဆိုပါယုတ်ညံ့ယာယီပေါ်၌ရှိသောအမြှေး၏ကျန်ရှိသောခုနှစ်, ရငျ့အကြာတွင်သည်ထင်ရှားပြီးအတန်ငယ်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်-to-medial ဦးတည်။ (နို့တိုက်သတ္တဝါများအတွက် STG, posterior parietal cortex နှင့် prefrontal cortex ၏အစိတ်အပိုင်းများနှင့်အတူအဆိုပါယုတ်ညံ့ယာယီ cortex, High-အလို့ငှာအသင်းအဖွဲ့ဒေသများဖြစ်ကြသည် evolutionarily လည်းလတ်တလောနေသော38, 39) ။ ဤဒေသများ၏ကျွန်ုပ်တို့၏လေ့လာရေးနောက်ပိုင်းတွင် cortical ဖှံ့ဖွိုးတိုးတအချို့သောဒီဂရီဖို့ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ် sequence ကိုအောက်ပါအတိုင်းကြောင်းအကြံပြုဖြစ်နိုင်သည်ရင့်ကျက်ဖို့ထင်ရှားကျော်ကြားသော။
အဆိုပါ GM ကအရှုံးအခြေခံအတိအကျဖြစ်စဉ်ကိုမသိရသည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ axon myelination ၏ပထမလေးဆယ်စုနှစ်များစွာအတွင်းနှောက်အဖြူကိစ္စတိုး (40) နှင့်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါ (ကြည့်ရှုလေ့လာ GM ကအရှုံးကိုရှင်းပြစေခြင်းငှါ41, 42) ။ sulcal နှင့် gyral ခေါက်ပုံစံများအတွက်ပြောင်းလဲမှုများသို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောရေဓါတ်ခန်းခြောက်ကဲ့သို့သောအခြား nonatrophic ဖြစ်စဉ်များအတွက် GM ကသိပ်သည်းဆကိုသြဇာလွှမ်းမိုးနိုင်ပေမယ့်, GM ကသိပ်သည်းဆဆုံးရှုံးမှုများအတွက်အဓိကအကြောင်းရင်းမသိရသည်။ ကျနော်တို့ (ကအနည်းဆုံးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း Synaptic တံစဉ်များကို၏လုပ်ငန်းစဉ်အားဖြင့်မောင်းနှင်စေခြင်းငှါမှနျး43) အတူတကွ trophic glial နှင့်သွေးကြောအပြောင်းအလဲများနှင့် / သို့မဟုတ်ဆဲလ်ကျုံ့နှင့်အတူ (44) ။ အဆိုပါမျောက်နှင့်လူ့ဦးနှောက် cortical ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ပြသခဲ့ပြီးအဖြစ်ထို့ကြောင့် GM ကရငျ့အတွက်ဒေသ-တိကျတဲ့ကွဲပြားခြားနားမှု (က, cortex အတွက်နောက်ခံ heterochronous Synaptic တံစဉ်များကိုထံမှဖြစ်ပေါ်စေမည်18, 45-48) ။ စိတ်ဝင်စားစရာ, အတိုကျရိုကျ cortex ထဲမှာ, dorsolateral prefrontal cortex pruning myelination မကြာခဏအပြိုင်အတွက်ပေါ်ပေါက်စေမည်အကြောင်းသရုပ်ပြ၎င်း၏အကြာတွင် myelination အချိန်နဲ့တိုက်ဆိုင်, နောက်ဆုံးရင့်ကျက်။
ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်လက်တွေ့သက်ရောက်မှုရှိစေခြင်းငှါ။ ဥပမာအားဖြင့်, အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာ,3နှစ်ပေါင်းအသက်မတိုင်မီစတင်ခြင်းနှင့်အတူ, (အသက်တာ၏ပထမဦးဆုံး2နှစ်များတွင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနှောက် GM က hyperplasia ပြသ494 နှစ်ပေါင်းဤဒေသများတွင်ဖွံ့ဖြိုးမှု၏နှေးကွေးမှုနှုန်းအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်7နှစ်ပေါင်းအားဖြင့်) နှင့်ပိုမိုကြီးမားတိုကျရိုကျနှင့်ယာယီ GM က volumes ကို, (50, 51) ။ ကလေးဘဝ-စတင်ခြင်း schizophrenia, 10 နှစ်ပေါင်းအသက်န်းကျင်စတင်ခြင်းတစ်ခုယုတ်အသက်အရွယ်နှင့်အတူ, back-to-ရှေ့ဖက်ရှင်အတွက်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်း anteriorly ဖြစ်စဉ်များတဲ့ဒီကဗျာ parietal GM ကအရှုံး, (နှင့်ဆက်စပ်နေသည်52), အရွယ်ရောက်ပြီးသူ-စတင်ခြင်း schizophrenia (ထိုထက်ပိုသောပုံမှန်ပုံစံ) ကိုပိုပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန် (နောက်ပိုင်း-ဖွံ့ဖြိုးလာခြင်းယာယီနှင့်တိုကျရိုကျဒေသများတွင်လိုငွေပြမှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်သော်လည်း53-55) နှင့် heteromodal ဒေသများရွေးချယ်မူမမှန်နှင့်ဆက်နွယ်နေသည် (29) ။ ထို့ကြောင့်ပွောငျးလဲအခြေခံရင့်ကျက်ပုံစံ၏ဒီဂရီသို့မဟုတ်အချိန်ကိုက်အနည်းဆုံးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသည်ဤ neurodevelopmental မမှန်အခြေခံစေခြင်းငှါလည်းကောင်း။
အချို့သော cortical ဒေသများအတွက်အပြောင်းအလဲများကို၏ပြင်းအားမြင့်မားသိသာနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကြိုတင် longitudinal လေ့လာမှုများအတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာတိုးတက်မှုနဲ့အရှုံးနှုန်းထားများနှင့်ကိုက်ညီသည်။ (တစ်ဦးအစောပိုင်းကအစီရင်ခံစာ28), ကျနော်တို့က caudate နှင့် Corpus callosum ၏ခန္ဓာဗေဒအတွက်ဒေသခံတစ်ဦးအဆင့်မှာဒေသခံကြီးထွားနှုန်းနှင့်တစ်သျှူး-ဆုံးရှုံးမှုနှုန်းကိုတိုင်းတာရန် tensor မြေပုံသုံးပြီးတစ်ခုချဉ်းကပ်မှုများပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်။ ဤအအဆောက်အဦများ၏အလွန်သေးငယ်ဒေသများတွင်ဒေသခံကြီးထွားမှုနှုန်းမှာတစ်နှစ်လျှင် 40% ထက်ကျော်လွန်နှင့်ဒေသခံတစ်သျှူး-ဆုံးရှုံးမှုနှုန်း Basal ganglia ၏သေးငယ်တဲ့ဒေသများအတွက်တစ်နှစ်လျှင် 40% အထိရောက်ရှိခဲ့သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်တိုးလာ Spatial resolution ဖြင့်, ခန္ဓာဗေဒမြေပုံချဉ်းကပ်မှုမှရရှိသောပြောင်းလဲမှုအထွတ်အထိပ်ဒေသခံနှုန်းထားများမကြာခဏခန္ဓာဗေဒကှကျဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံ၏ထုထည်ကြီးမားသောလေ့လာမှုများအတွက်ရရှိသောသူတို့အားထက် သာ. ကြီးမြတ်ဖြစ်ကြသည်။ lobar volumes ကို၏အကဲဖြတ်ဥပမာ, ကြီးမားတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကိုကျော်ကြီးထွားသို့မဟုတ်တစ်သျှူးများ-ဆုံးရှုံးမှုနှုန်းပျမ်းမျှနိုင်ပြီး, ထုထည်ကြီးမားသောပြောင်းလဲမှု၏အထွတ်အထိပ်နှုန်းထားများ correspondingly လျှော့ချနေကြသည်။ ဤအ cortical အပြောင်းအလဲများကိုများအတွက်ဆယ်လူလာအလွှာ myelination, dendritic တံစဉ်များကို, နှင့်အာရုံခံအတွက်အပြောင်းအလဲ glial, သွေးကြောများနှင့်ကွဲပြားခြားနားသော cortical laminae အတွက် neurite ထုပ်ပိုးသိပ်သည်းဆပေါင်းစပ်ဖြစ်နိုင်သည်။ ဒါ့အပြင်နောက်ခံရေအကြောင်းအရာပေါ်အခြေခံပြီးသော MRI signal ကို၏ relaxometric ဂုဏ်သတ္တိများအတွက်အပြောင်းအလဲရှိကောင်းရှိနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါ myelination အစိတ်အပိုင်းအကဲဖြတ်သည့် volumes ကိုအတော်လေးအသေးများမှာအထူးသဖြင့်လာသောအခါနှစ်ပေါင်းများစွာ၏ကာလကိုကျော် cortical volumes ကိုအတွက်အလွန်ကြီးမားသောအသားတင်ရာခိုင်နှုန်းကိုအပြောင်းအလဲဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။
ဒီလေ့လာမှုအများအပြားန့်အသတ်ရှိပါတယ်။ ဤရွေ့ကားဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းပြောင်းလဲမှုကိုခြေရာခံရန်လုံလောက်သောအာဏာကိုပေးခြင်း, 52 ခန္ဓာဗေဒမော်ဒယ်များဖန်တီးခဲ့ကြရသော 1,976 Scan ဖတ်, အပေါ်အခြေခံပြီး, ဒါပေမယ့် only13 သားများမှဖြစ်ကြ၏။ ထို့အပြင်, ဒီစိတ်ကျန်းမာရေးလေ့လာမှုအမျိုးသား Institute ၏တစ်ဦးလွှဲပြောင်းဘက်လိုက်မှုထင်ဟပ် 125 ပျမ်းမျှအိုင်ကျူနဲ့ nonrepresentative လူဦးရေဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကအလွယ်တကူရောနှော-မော်ဒယ်ဂရပ်များအတွက်မြင်ခဲ့သည်ဖြစ်သော်လည်းအချိန်ကို-ချုံးရုပ်ရှင် sequence ကိုအတွက် prepubertal အမြတ်ကိုဖမ်းယူနိုင်ခဲ့ကြဘူး။ သာခြောက်လယောက်ျားခုနစ်အမျိုးသမီးနမူနာထဲမှာရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အလားတူပဲ, ဦးနှောက်ရငျ့အတွက်ကျားမကွဲပြားမှု, စူးစမ်းလို့မရပါ။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက်အစောပိုင်းဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့် functional ဖြစ်စေနဲ့ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်သမိုင်းမှတ်တိုင်များရန်၎င်း၏စပ်လျဉ်း၏ရင့်ကျက် sequence ကိုအပေါ် key ကိုသတင်းအချက်အလက်လှန်။
ကျနော်တို့ DRs ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ တန်ဖိုးရှိသော input ကိုများနှင့်မှတ်ချက်များများအတွက်စတီဗင်ပညာရှိ (ကျန်းမာရေးအမျိုးသား Institutes) နှင့်အဲလက်စ်မာတင် (ကျန်းမာရေးအမျိုးသား Institutes) ။ ဤလုပ်ငန်းကိုစိတ်ကျန်းမာရေး Intramural ရန်ပုံငွေအမျိုးသားအင်စတီကျုကထောက်ခံခဲ့သည်; အဆိုပါဇီဝဆေးပညာ Imaging နှင့် Bioengineering အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအင်စတီကျု (eb 001561) နှင့်သုတေသနအရင်းအမြစ်များအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်စင်တာ (P41 RR13642 နှင့် R21 RR19771) မှသုတေသနထောက်ပံ့ငွေ; နှင့်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအပေါ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနှင့်အမျိုးသား Institute ၏အမျိုးသားသိပ္ပံ (P20 MH / DA52176) ကပူးတွဲရန်ပုံငွေဦးနှောက်ပုံထုတ်ခြင်းများအတွက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Consortium မှလူ့ဦးနှောက် Project မှထောက်ပံ့ငွေ။
အတိုကောက်: GM ကမီးခိုးရောင်ကိစ္စ; STG, သာလွန်ယာယီ gyrus ။
1 ။ Thatcher, RW (1992) ဦးနှောက်မှတ်ဉာဏ်။ 20, 24-50 ။ [PubMed]
2. Thatcher, RW, Walker က, RA & Giudice, အက်စ် (1987) သိပ္ပံ 236, 1110-1113 ။ [PubMed]
3 ။ ဂျွန်ဆင်, MH (2001) နတ်။ ဗျာ neuroscience ။ 2, 475-483 ။ [PubMed]
4 ။ Stiles, ဂျေ (2000) Dev မှ။ Neuropsychol ။ 18, 237-272 ။ [PubMed]
၅။ Schlaggar, BL, Brown, TT, Lugar, HM, Visscher, KM, Miezin, FM & Petersen, SE (5) Science 2002, 1476-1479 ။ [PubMed]
6. Cepeda, NJ, Kramer, AF & Gonzalez de Sather, JC (2001) Dev ။ စိတ်ရောဂါ။ ၃၇, 715-730 ။ [PubMed]
7. Tamm, အယ်လ်, Menon, V. & Reiss, AL (2002) ဂျေ Am ။ Acad ။ ကလေး ဆယ်ကျော်သက် စိတ်ရောဂါကုသမှု 41, 1231-1238 ။ [PubMed]
၈။ Luna, B. , Thulborn, KR, Munoz, DP, Merriam, EP, Garver, KE, Minshew, NJ, Keshavan, MS, Genovese, CR, Eddy, WF & Sweeney, JA (8) Neuroimage 2001, 786-793 ။ [PubMed]
9. Chugani, HT, Phelps, ME & Mazziotta, JC (1987) Ann ။ Neurol ။ ၂၂, 487-497 ။ [PubMed]
10 ။ Meyer-Lindenberg, အေ (1996) Electroencephalogr ။ Clin ။ Neurophysiol ။ 99, 405-411 ။ [PubMed]
11. Giedd, JN, Blumenthal, J. , Jeffries, NO, Castellanos, FX, Liu, H. , Zijdenbos, A. , Paus, T. , Evans, AC & Rapoport, JL (1999) Nat ။ Neurosci ။ ၂, 861-863 ။ [PubMed]
12. Sowell, ER, Thompson က, PM, Tessner, KD & Toga, AW (2001) ဂျေ Neurosci ။ ၂၁, 8819-8829 ။ [PubMed]
13. Jernigan, TL, Trauner, DA, Hesselink, JR & Tallal, PA (1991) Brain 114, 2037-2049 ။ [PubMed]
14. Jernigan, TL & Tallal, P. (1990) Dev ။ Med ။ ကလေး Neurol ။ ၃၂, 379-385 ။ [PubMed]
15. Sowell, ER, Peterson, BS, Thompson, PM, ကြိုဆိုပါတယ်, SE, Henkenius, AL & Toga, AW (2003) Nat ။ Neurosci ။ ၆, 309-315 ။ [PubMed]
16. Sowell, ER, Thompson က, pm တွင်, ကေတီဟုမ်း, CJ, Jernigan, TL & Toga, AW (1999) နတ်။ Neurosci ။ ၂, 859-861 ။ [PubMed]
၁၇။ Huttenlocher, PR (၁၉၉၄)၊ လူ့အပြုအမူနှင့်ဖွံ့ဖြိုးဆဲ ဦး နှောက်။ Dawson, G. အ & Fischer, K. (Guilford, New York), စစ။ 17-1994 ။
18. Bourgeois, JP, Goldman-Rakic, PS & Rakic, P. (1994) Cereb ။ Cortex 4, 78-96 ။ [PubMed]
19 ။ Rakic, ကလေးနှင့်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်စိတ်ရောဂါကုသမှု, ed အတွက် P. (1996) ။ Lewis က, အမ် (ဝီလျံနဲ့ Wilkins, Baltimore), စစ။ 9-30 ။
20 ။ Giedd, ဖြစ်မှု, Snell, JW, Lang, N. , Rajapakse, JC, Casey, BJ, Kozuch, PL, Vaituzis, AC, Vauss, YC, ဟမ်ဘာဂါ, SD, Kaysen, ဃ, et al။ (1996) Cereb ။ cortex 6, 551-560 ။ [PubMed]
21. Sled, JG, Zijdenbos, AP & Evans, AC (1998) IEEE Trans ။ Med ။ ပုံရိပ် ၁၇, 87-97 ။ [PubMed]
22. Collins, DL, Neelin, P. , Peters, TM & အီဗန်, AC (1994) ဂျေ Comput ။ Assist ။ Tomogr ။ ၁၈, 192-205 ။ [PubMed]
23. Shattuck, DW & Leahy, RM (2001) IEEE Trans ။ Med ။ ပုံရိပ် ၂၀, 1167-1177 ။ [PubMed]
24. Zijdenbos, AP & Dawant, BM (1994) Crit ။ Biomed ။ Eng ။ ၂၂, 401-465 ။ [PubMed]
25 ။ Thompson က, လေး, Hayashi, KM, က de Zubicaray, G. အ, Janke, AL, နှင်းဆီ, SE, Semple, ဂျေ, Herman, ဃ, ဟောင်ကောင်, MS, Dittmer, အက်စ်အက်စ်, Doddrell, DM, et al။ (2003) ဂျေ neuroscience ။ 23, 994-1005 ။ [PubMed]
၂၆ ။ Thompson, PM, Mega, MS, Vidal, C, Rapoport, JL & Toga, A. (၂၀၀၁) Cortical ပုံစံကိုက်ညီခြင်းနှင့်လူ ဦး ရေအခြေခံသည့်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော ဦး နှောက် Atlas ကို အသုံးပြု၍ ဦး နှောက်ဖွဲ့စည်းပုံ၏ရောဂါများကိုသတ်သတ်မှတ်မှတ်ပုံစံများကိုရှာဖွေခြင်း၊ IEEE Conference on ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပုံရိပ်တွင်သတင်းအချက်အလက်စီမံခြင်း (IPMI), UC Davis 26 (Springer, Berlin) ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
27. Ashburner, ဂျေ, Csernansky, JG, Davatzikos, C တို့, Fox, NC, Frisoni, GB & Thompson က, PM (2003) Lancet Neurol ။ ၂, 79-88 ။ [PubMed]
28. Thompson က, PM, Giedd, JN, ဝုဒ်, RP, မက်ဒေါ်နယ်, D. , အီဗန်, AC & Toga, AW (2000) သဘာဝ 404, 190-193 ။ [PubMed]
29. Buchanan, RW, Francis, A. , Arango, C, Miller, K. , Lefkowitz, DM, McMahon, RP, Barta, PE & Pearlson, GD (2004) Am ။ ဂျေစိတ်ရောဂါကုသမှု 161, 322-331 ။ [PubMed]
30 ။ Giedd, ဖြစ်မှု, Jeffries, NO, Blumenthal, ဂျေ, Castellanos, FX, Vaituzis, AC, ဖာနန်ဒက်ဇတီ, ဟမ်ဘာဂါ, SD, လျူ, အိပ်ချ်, နယ်လ်ဆင်, ဂျေ, Bedwell, ဂျေ, et al။ (1999) Biol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု 46, 892-898 ။ [PubMed]
31 ။ Mesulam, MM (1998) ဦးနှောက် 121, 1013-1052 ။ [PubMed]
32 ။ Calvert, ဂျော်ဂျီယာ (2001) Cereb ။ cortex 11, 1110-1123 ။ [PubMed]
33. မာတင်, အေ & Chao, LL (2001) Curr ။ ထင်မြင်ချက်။ Neurobiol ။ ၁၁, 194-201 ။ [PubMed]
34 ။ အပြုအမူနှင့်သိမှု Neurology ၏ Mesulam, အမ် (2000) အခြေခံမူ (Oxford တက္ကသိုလ် Univ ။ စာနယ်ဇင်း, နယူးယောက်) ။
35 ။ Puelles, အယ်လ် (2001) ဖီလို။ ဖြတ်ကျော်။ R. Soc ။ လန်ဒန် B ကို 356, 1583-1598 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
36. Puelles, အယ်လ် & Rubenstein, JL (2003) Trends Neurosci ။ ၂၆, 469-476 ။ [PubMed]
37 Rubenstein, JL, Martinez, S. , Shimamura, K. & Puelles, L. (1994) Science 266, 578-580 ။ [PubMed]
38. Allman, ဂျေ, Hakeem, အေ & Watson, K. (2002) အာရုံကြောသိပ္ပံပညာရှင် 8, 335-346 ။ [PubMed]
39 ။ Fuster, JM (2002) ဂျေ Neurocytol ။ 31, 373-385 ။ [PubMed]
40. Bartzokis, G. အ, Beckson, အမ်, လူး, PH, Nuechterlein, KH, Edwards က, N. & Mintz, ဂျေ (2001) Arch ။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု 58, 461-465 ။ [PubMed]
41 ။ ဂိ, FM ရေ (1989) Schizophr ။ နွားလား။ 15, 585-593 ။ [PubMed]
42. Benes, FM ရေ, လိပ်, အမ်, Khan က, Y. & Farol, P. (1994) Arch ။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု 51, 477-484 ။ [PubMed]
43 ။ Huttenlocher, PR စနစ် (1979) ဦးနှောက် Res ။ 163, 195-205 ။ [PubMed]
44 Morrison, JH & Hof, PR (၁၉၉၇) သိပ္ပံ ၂၇၈, 412-419 ။ [PubMed]
45. Rakic, P. , Bourgeois, JP & Goldman-Rakic, PS (1994) Prog ။ Brain Res ။ ၁၀၂, 227-243 ။ [PubMed]
46 ။ Bourgeois, JP (1997) Acta ။ Paediatr ။ ပျော့ပျောင်း။ 422, 27-33 ။ [PubMed]
47. Zecevic, N. , Bourgeois, JP & Rakic, P. (1989) Brain Res ။ Dev ။ Brain Res ။ ၅၀, 11-32 ။ [PubMed]
48. Huttenlocher, PR & Dabholkar, AS (1997) J. Comp ။ Neurol ။ 387, 167-178 ။ [PubMed]
49. Courchesne, အီး, Carper, R. & Akshoomoff, N. (2003) ဂျေ Am ။ Med ။ Assoc ။ 290, 337-344 ။ [PubMed]
50. Saitoh, O. & Courchesne, အီး (1998) စိတ်ရောဂါကုသမှု Clin ။ Neurosci ။ 52 ပေးသွင်း, S219-S222 ။ [PubMed]
51. Carper, RA, မောရှေ, P. , Tigue, ZD & Courchesne, အီး (2002) Neuroimage 16, 1038-1051 ။ [PubMed]
52 Thompson က, pm တွင်, Vidal, C တို့, Giedd, JN, Gochman, P. , Blumenthal, ဂျေ, Nicolson, R. , Toga, AW & Rapoport, JL (2001) proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ ယူအက်စ်အေ 98, 11650-11655 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
53 Shenton, ME, Dickey, CC, Frumin, M. & McCarley, RW (2001) Schizophr ။ Res ။ 49, 1-52 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
54 Gur, RE, Cowell, P. , Turetsky, BI, Gallacher, အက်ဖ်, Cannon, တီ, Bilker, ဒဗလျူ & Gur, RC (1998) Arch ။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု 55, 145-152 ။ [PubMed]
55. DeLisi, LE, Stritzke, P. , Riordan, H. , Holan, V. , Boccio, အေ, Kushner, အမ်, McClelland, J. , Van Eyl, O. & Anand, A. (1992) Biol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု ၃၁, 241-254 ။ [PubMed]